‘तस्करका विरुद्धमा हामी उभिएका छौं’(अन्तर्वार्ता) - The Public Today
‘तस्करका विरुद्धमा हामी उभिएका छौं’(अन्तर्वार्ता)
१६ बैशाख २०७७, मंगलवार १६:२८
खोलाको अबैध दोहन, वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु, वन पैदावार चोरी निकासी गर्नु र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्नु कानुनी अपराध हो । एउटा रुखा पानी हो, हाम्रो प्राण हो । साथै वातावरण सन्तुलित राख्ने वनस्पत्ति हो ।तर, लकडाउनको मौका छोपेर प्राकृतिक श्रोतसाधन, खोलानालाको उत्खनन, वनबाट काठ तस्करी ह्वातै बढेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहोन कसरी, किन, कसले गर्छ ? गराउँछ ? यसलाई रोक्न के गरिदैंछ ? यिनै विषयमा द पब्लिक टुडेका लागि युवा पत्रकार तथा समाजिक अभियन्ता राजकरण महतोले नेकपाका नेता प्रकाश पोखरेलसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :
१. प्राकृतिक श्रोतसाधनको दोहोन किन हुन्छ ?
– खराब मनोवृत्ति भएका मानिसहरुको कारणले खोला—नदिहरु अबैध उत्खननको भइरहेको छ । जङ्गल कटानको पनि प्रक्रिया बनेको छ । कुनै बेला २०१७ साल, २०३६साल, २०४६ सालको वरिपरी हाम्रो चुरेको जुन स्तरमा जङ्गल फडानी, कटानी र तस्करी भयो त्यसैको कारणले आज उत्तरतिर जङ्गल विनास भएको छ । भू—क्षय र नदीको कारणले चाहीँ दक्षिणी भूभाग पुरै आज मरुभुमिमा परिणत हुदैछ । लकडाउनको मौकामा एउटा तत्व, एउटा प्रवृत्ति लगातार नदी र वन कटानी गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
२. लकडाउनको मौका छोपेर भइरहेको अबैध खोला दोहोन र वन तसकरी रोक्न केही पहल भएको छ ?
– हामीले महोत्तरीका मूलभूतरुपमा चारवटा राजनीति पार्टीहरु, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जिल्ला समन्वय समिति र जनप्रतिनिधिहरुको विचमा साँझा ढङ्ले छलफल गरेका छौ, यो दायित्व मूलभूत रुपमा जनताको हो, जनप्रतिनिधिको हो, पुलिस प्रशासनले मात्र यसमा रोक्दैन् । त्यसैका निम्ति हामीले अहिले के भनिराखेका छौ भने खोलाहरुको उत्खनन गर्ने, अवैध ढङ्गले चाहिँ गिट्टी बालुवाहरु निकाल्ने, रातारात ठुलो स्तरमा चाहीँ केन्द्रिकृत गर्ने र पछि आवश्यकताका आधारमा विक्रि गर्ने यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसका बारेमा दिनानुदिन प्रशासनसँग, जनप्रतिनिधिसँग लगातार हामी छलफलमा छौं । महोत्तरीका सन्दर्भमा पछिल्लो पटक सिडिओ, एसपीले पनि भन्नुभएको छ र हामी राजनिति पार्टी जनप्रतिनिधिले पनि यो वारेमा कुराकानी गरको छौं, कि अहिले बन्दाबन्दीको बेलामा नदि र खोलाहरुको उत्खननको प्रक्रिया निषेध गरौँ । बन्द गरौं । त्यसमध्ये पनि राती त कुनै पनि प्रकारले त खन्न दिन सकिदैन, पाइदैन र दिनु हुदैन ।
३. अनि कसरी हुन्छ रातरात खोला उत्खनन ? व्यवसायीहरुको तस्करको खोल ओडेर गुन्डागर्दी गरिरहेका छन् । नेताहरुले तस्करहरुलाई संरक्षण दिइरहेको अवाज सुनिन्छ नि ?
– होइन हामीले त्यसको नेतृत्व विल्कुन गरेका छैनौ । हामी तस्करका विरुद्धमा, हामी चाहीँ राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने र रातारात त्यो ढङ्गले धन्दा गर्नेहरुको विरुद्धमा छौं । हामी कुनै पनि हालतमा त्यो प्रवृति र त्यस्ता पात्रहरु : चाहे त्यो व्यवसायीको खोल ओढेका होस्, चाहे प्रशासनिक आवरणमा होस्, चाहे राजनीतिक आवरणमा होस् कुनै प्रकारको आवरणमा राज्यको सम्पत्ति, राज्यको प्राकृतिक सो्रतसाधनमाथि दोहन गर्ने प्रवृतिका विरुद्धमा छौ । हामी त्यसका विरुद्धमा लड्न तयार छौ, तपाईहरु जस्ता युवा पत्रकार साथीहरु, अभियन्ता साथीहरुले जुन ढङ्गले अवाज उठाईरहनु भएको छ, त्यसमा हामीले साथ सहयोग र समर्थनसहित एक्यबद्धतामा छौ । हामीले भनेका छौ, जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकलाई यसको संयोजन गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मा छ । हामीले सँगै के पनि भनेका छौ भने, यदि प्रशासनिक ढङ्गले यसमा हस्तक्षेप गरेर तस्करहरुका विरुद्धमा तपाईहरु उभिन्न हुन्न भने स्थानीय जनतालाई साथमा लिएर त्यसका विरुद्धमा हामी उभिन्छौ । हामीले यो कुरा भनेका छौ ।
तस्करको मनोवल गिराउने र उसका सवै अबैध धन्दाहरु वन्द गर्नका निमित्ति यो एउटा पक्षले मात्रै गर्न सक्दैन् । प्रहरीप्रशासन, जनप्रतिनिधि,राजनिति दल र स्थानिय जनसमुदाय यो सवैको साझा प्रयत्नबाट त्यो प्रवृतिलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौ ।
४. त्यो कहिले हुन्छ ? हामी एक दशकदेखि यस्तै कुरा सुन्दै आईरहेका छौ ?
–स्वभाविक रुपमा हामी सुन्दै आएका होइनौ, हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न पनि गरेका छौ । त्यसो भनेको नदि खोलाहरु खन्नै हुदैन, हामीले समयमा त्यसलाई ठिक ढङ्गले उत्खनन् गरेनौ भने पनि माथिबाट चुरे भत्केर बगेर आउने प्रक्रिया र नदि चाँहि उकास्कीयर गाउँमा पस्ने स्थिति पनि छ । त्यसैले एउटा मापदण्ड बनाएर निश्चित नदिलाई चाहिँ उत्खनन गर्ने र त्यसबाट आएको आम्दानी स्थानीय सरकार र प्रदेशको सरकार सम्म पुग्ने गरी त्ससको राजस्व वाँडफाँडको एउटा नीति बनेकोे छ ।
५.प्रकाश जी ! तपाई जस्तो राजनीति दल चाहे नेकपा पार्टी होस्, चाहे नेपाली काँग्रेस होस्, जनता समाजवादी पार्टी, जुन सुकै राजनीति दलहरु होस् । प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई बचाउन सहयोग गर्ने हो कि तस्करहरुलाई बचाउने हो ?
–होईन, हामी तस्करका विरुद्धमा छौ । कुनै पनि गतिविधिमा म र मेरो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता यो प्रक्रियामा कोही पनि संलग्न हुने छैन् । संग्लग्नताको स्थिति हामीले प्राप्त ग¥र्यौ भने, हामी त्यसका विरुद्धमा खवरदारी गर्न सक्दैंनौं ।
६.यहाँ त नेताहरुको लगानी ठेक्का र क्रसरमा छ भनेर सुनिन्छ ?
– म एकदम विन्रमता पूर्वक हातजोडेर भन्छु, राजनितिक दल यो प्रक्रियामा काहिँ पनि सहभागिता छैन । राजनितिक दलको आवरणमा केहीले आफ्नो निजि धन्दा, उपार्जनको धन्दा, नदि—खोला र वनजङ्गलको तस्करी गरेर चाहीँ आयआर्जनको काममा यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु कोही संग्लग्न हुनसक्छ । त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु । तर, राजनीतिक पार्टी औपचारिक रुपमा यो प्रक्रियामा काहीँ पनि सामावेश छैन ।
७.त्यसो भए को छन् त्यस्ता तस्करी गर्ने ? कारवाही गर्न पहल गरेर देखाइ दिनुस् ?
– हामी तथ्यको खाजीमा छौं । हामी छानविनको प्रक्रियामा छौ । कुनै पनि नेपाल कम्न्युष्ट पार्टीको कोही पनि नेता, कार्यकर्ता वा जनप्रतिनिधि अवैध ढङ्गले नदि उत्खनन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन र काठ तस्करीको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन् । यदि त्यस्ता प्रकारका जनप्रतिनिधिहरु कोही सहभागी रहेछन् भने हामी खोजविनको प्रक्रियाद्धारा कारवाही गर्छौ र जनताका अगाडी सार्वजानिक गर्छौ ।